Samy nilaza azy ho afa-po tamin’izany avokoa moa ny ankamaroan’ireo namaly ny antso. Mbola andrasana fatratra kosa hatreto ny tena lalan-kizorana sy tanjona ao anatin’izay fanoherana izay fa ny vaovao nisongadina tao anatiny aloha izany dia ny fifaneken’ny maro izay nivory hitambatra ao anatin’ilay fanoherana. Etsy an-kilany, asa na hivory be tahaka an’iny koa na hanao ahoana ireo izay efa nilaza sy mieritreritra kosa ny hanohana ny fitondram-panjakana fa ny azo hamehezana azy aloha izany dia hanomboka eto ny baolina politika hifampitadiavan’ny mpitondra sy mpanohitra saingy fanontaniana mipetraka hatrany ny hoe ho tena izy ve sa ho sarintsariny indray ? Iza no hahatanty na tsia io demokrasia terena haniry eto amin’ny tanintsika io ? Ny vahoaka koa ao anatin’izany rehetra izany dia miandry ny demokrasia marina afaka hiara-dalana amin’ny fampandrosoana hanavao ny ativilaniny.